tranolay ambony tampon-trano
Tranom-borona matevina vita amin'ny alimo
Inona no karazana tranolay ambony tafo no mahazo aina indrindra?
Ny fiara tsy miankina dia miha mahazo vahana tsikelikely eto amin'ny firenena. Ny hafanam-pon'ny Sinoa amin'ny fivezivezena mandeha irery dia mihamafana isan-taona. Mpankafy fitsangatsanganana maro no maniry ny hanenjika ireo toerana tsy azo idirana ireo ary faly mankafy ny hafaliana amin'ny lasy an-kalamanjana. Na izany aza, ny dia an-kalamanjana ankehitriny dia ambany ...
Torohevitra tsara indrindra hitobiana an-day?
Ny tranolay no tranontsika hivoahana any ivelany. Ny kalitaon'ny tranolay dia mamaritra ny fiarovana sy ny fampiononana ny torimasontsika amin'ny tontolo ivelany. Noho izany, zava-dehibe ho anao ny manara-penitra ny fananganana lay! Nandritra ny fotoana elaela, ny namana sasany dia tsy nahazo tsara ny fahaiza-manao fananganana tranolay, ...
Hatraiza ny haben'ny fiara tianao hapetraka amin'ny tranolay?
Raha mbola azo antoka ny fametrahana azy dia safidinao manokana izay habe apetrakao. Ny orinasanay koa dia manana ny tampon'ny tranon'ny sinoa ao Shina, tongasoa izahay hanoro hevitra. Miaraka amin'ny fiakarana sy fivoaran'ny fanatanjahantena an-kalamanjana ao an-trano sy any ivelany, ny olona dia tsy mahazatra ny teny hoe lasy. Betsaka ny olona mampiasa lasy ho fa ...
Ahoana ny fomba hisafidianana toerana fitobiana hahafahanao matory amin'ny toerana tsara indrindra?
Amin'ny maha mpamatsy tranolay an-tampon-trano anao dia mizara aminao. Miaraka amin'ny faritra midadasika sy ny toerana kanto i Xinjiang dia fantatra amin'ny anarana hoe "ny paradisan'ny fanatanjahantena ivelany". Alao an-tsaina ny mitady toerana mangatsiaka sy madio amin'ny hafanana mafana. Afatory ny lainy, sokafy ny kitapo fatoriana, ary apetraho eo ambanin'ny kintana, fitalahoana ...
Famaritana vokatra SWAG !!!
Zava-dehibe! Ho an'ny fivoriana azo antoka sy tsara, ampiasao ary karakarao dia vakio ary araho ny torolalana rehetra. Izay rehetra mampiasa ity tranolay ity dia tokony hamaky ity boky ity aloha. Endri-javatra manokana ● Paosy fitehirizana kely eo an-joro. Toerana tsara hitazonana lakile na jiro kely. ...
Ny tantaran'ny tranolay an-tampon-trano
Ny Roof Top Tentalso dia manana ny anarana hoe "trano" eo an-tampon-trano, manana tantara dimy na enina am-polony amin'ny indostria manodidina novolavolaina niaraka tamin'ny indostrian'ny mpamokatra fiara. Miaraka amin'ny fiakaran'ny fananana fiara ao Shina, miha-miadana ny fizahan-tany mitondra fiara, ary ny Roof To ...
Inona avy ireo fitaovan'ny akoron'ny tranolay ambony tafo?
Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd. dia iray amin'ireo mpanamboatra vokatra ivelany manana traikefa 20 taona eo amin'ny sehatra, manokana amin'ny famolavolana, famokarana ary fivarotana vokatra manarona tranolay tranofiara, tranolay ambony tafo, tranolay fitobiana, kitapom-batsy, kitapo fatoriana , tsihy sy h ...
Antsipirian'ny vokatra SWAG sy ny fampiasana azy!
Ny tranolay Swag tokana dia mora idirana, satria azo sokafana amin'ny halavany manontolo. Manome anao ny fotoana hatoriana eo ambanin'ny kintana io, mbola voaro amin'ny bibikely manelingelina amin'ny rindrin'ny harato. Vokatr'izany dia ho tsara sy milay foana ny tranolainao, na dia mandritra ny andro fahavaratra mafana aza. Io no ultimat ...
Ahoana ny fomba hisafidianana kere fiara ivelany?
Ny kodiarana fiara dia tokony ho mora apetraka, mora vohaina ary aforeto, mety hivezivezy, ny safidy tsara indrindra amin'ny fitaovana firaka aliminioma, lamba vita amin'ny lamba rongony. Ny fiara antsy lafiny, no fomba lavorary hamita ny tobinao; manolotra fialofana amin'ny orana na masoandro. Ity tapa-kazo ity dia namboarina tsara, ary ...
Tranobe lakolosy varavarana lamba Arcadia
Ny tranolay lakolosy varavarana indroa Arcadia dia namboarina tamina ravin-tany tsy misy rano matevina sy ambony landihazo mahazaka rano, andry iray eo afovoany. Ny vetilation dia avy amin'ny varavaran'ny efijery akaiky akaiky indrindra ary koa ny varavarankely 4 amin'ny sisin-dàlana mihidy. Maka olona roa manodidina ny 10 m ...
Tranolay maharitra maharitra maharitra an-kalamanjana Austrailian Swag Tent
Ny tranolay Swag tokana dia mora idirana, satria azo sokafana amin'ny halavany manontolo. Manome anao ny fotoana hatoriana eo ambanin'ny kintana io, mbola voaro amin'ny bibikely manelingelina amin'ny rindrin'ny harato. Vokatr'izany dia ho tsara sy milay foana ny tranolainao, na dia mandritra ny andro fahavaratra mafana aza. Io no farany ...
Soso-kevitra momba ny tranolay any an-tokotany
Ny tranolay ambony tafo Arcadia dia iray amin'ireo tranolay vaovao henjana indrindra amin'ny alàlan'ny hazavana eny an-tsena, hitan'ny olona ny fahitana 360 degre. Izy io dia mety tsara ho an'ny tranofiara 4x4 sy rig eny ivelan'ny lalana. Ny lanja mavesatra roa vita amin'ny lamba lehibe an'ny vatana lehibe dia teo no nanombohanay. Manampy ...
Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2005, izay manokana amin'ny famolavolana sy ny famokarana tranolantsara tranobe, tranon'ny tranobe, awnings ......
Adress: Zone Industrial Kangjiawu, Guan County, Hebei Province, Sina